Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi Oo Kulan La Yeeshay Ganacsatada Beesha Garxaajis Iyo Arimaha Ay Ka Wada Hadleen - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi Oo Kulan La Yeeshay Ganacsatada Beesha Garxaajis Iyo...
Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi Oo Kulan La Yeeshay Ganacsatada Beesha Garxaajis Iyo Arimaha Ay Ka Wada Hadleen
Madaxweynaha la doortey ee Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay kulan la yeeshay ganacsatada beelaha Garxaajis ee uu ka soo jeedo murashxii uu doorashada kaga Guuleystay ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro .
Kulanka oo ka qabsoomey guri ku yaala xaafada masalaha ee Koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxaa uu ka danbeeyey dalab ka yimid madaxweynaha la doortey oo doonaayey inuu doorashadii ka dib kulan la yeesho ganacsatalada beelaha Garxaajis .
Sida ay warar xog ogaal ahi u sheegayaan wargeyska Geeska Africa , madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hadal halkaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay in uu diyaar u yahay madaxweyne ahaan in uu dhameeyo waxii xanaf ah ee ay doorashadu reebtay isla markaana uu kulankani ibo fur u noqdo wado shaqeyn hor leh iyo sidii uu balan qaadeyba in uu dhageysto waxii tabasho ah .
Waxaa kale oo uu sheegay madaxweynuhu in uu ku talo jiro in uu kulan la yeesho Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro marka ugu horeysa ee suurto gal noqoto .
Sida ay wararku sheegayaan xubno ka tirsan ganacsatadan oo halkaasi ka Hadley ayaa iyaguna waxaa ay madaxweynaha uga mahad celiyeen dadaalka uu sameeyo si uu kulankaasi u qabsoomo , waxaana ay sheegeen in aaney dooneen arimo gaar ah iyo dano shakhsi balse madaxweynaha la doortey ay ka doonayan cadaalad .
Xubnaha halkaasi ka Hadley waxaa ay sheegen in aaney dooneen in cid gaar ah uu xilal u magacaabo amaba aaney odhaneen sidaas iyo sidaas same balse ay madaxweyne ahaan ay marti uga yahiin calaada , isaga oo maanka ku haya xaalada guud ee dalka ka jirta .
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ugu danbeyn halkaas ka Hadley ayaa isana geestiisa waxaa uu balan qaadey in laga heli doono cadaalad isaga oo codsadey in lala shaqeeyo oo la iska ilaawo xanaftii ka dhalatey doorashada .
Sida uu warku sheegay kulanka oo ahaa kii ugu horeeyey ee noociisa ah ee madaxweynaha la doortey uu la qaato ganacsato , ayaa u muuqda mid wax badan meesha ka saarey isla markaana abuurey jawi cusub